Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos uye Hi-Fi | Ndinobva mac
Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos uye Hi-Fi
Pakupedzisira nezuro timu yakaungana pamwechete kutepfenyura episode ye # podcastApple live. Vhiki rino mhirizhonga yakavimbiswa nekuda kweApple Music, Dolby Atmos uye Hi-Fi ... Uye chokwadi ndechekuti iyo Cupertino kambani ichapa yemhando yepamusoro kurira mune yako yekushambadzira mimhanzi sevhisi pasina muripo kumushandisi
Asi pane akati wandei nyaya kana akati wandei mapoinzi ekutsanangura mune izvi uye zvinoita sekunge kwete ese mahedhifoni anozokwanisa kupa iyi mhando kune dzakasiyana nyaya. Ndosaka panguva yepodcast nezuro takasarudza kuwedzera vashoma vevaimbi vemimhanzi vaenzi, kunyange mumwe wavo asina kukwanisa kuenda. Vaviri vashandisi uye vateveri vedu Teregiramu chiteshi uye mune iyi nyaya nyanzvi dzemimhanzi dzakawedzera kukosha kwakawanda kuzuro podcast.
Kubva pane iyo podcast yakarasika Tinokurudzira kuti iwe uzviteerere kubva kune chero mapuratifomu aripoIwe unogona zvakare kuzviona zvakananga kubva muvhidhiyo iyi yatinosiya pazasi:
Kana iwe uchida iwe unogona kuti tevera isu kurarama kubva chiteshi chedu paYouTube, kana mirira maawa mashoma kusvikira odhiyo yenhepfenyuro podcast yawanikwa kubudikidza iTunes. Kana iwe uine chero dambudziko, kusahadzika kana zano raunoda kugovera pane yedu podcast, iwe unogona kupindura nezvazvo rarama kuburikidza nehurukuro iripo paYouTube, uchishandisa iyo #podcastapple hashtag pa Twitter kana kubva teregiramu yedu chiteshi.
Chero zvazviri, chinhu chakanaka ndechekuti isu tiri kugadzira nharaunda yakanaka uye zvakanaka kune wese munhu kuti iwe upe yako tsanga yejecha nechero ipi sarudzo iwe yaunowana zvakare kana iwe ukatitevera isu rarama zvinoita kuti iwe utore chipo chine maraffles atiri kuitisa mune akananga iwo. Isu tinofara kushandisa imwe nguva neshamwari tichitaura nezve zvatiri kuda, Apple uye dzimwe nhau dzevhiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos uye Hi-Fi
Maitiro ekugadzirisa iyo Mac kuti uverenge zvinouya zviziviso
AirPods inogona kuve isina kurasikirwa odhiyo neyekuvandudza maererano naProsser